काठमाडौं । नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले कर्मचारीलाई १ रुपैयाँ लगानी गर्दा उनीहरुले औसतमा १ रुपैयाँ २१ पैसा नाफा कमाइदिने गरेको देखिएको छ । अहिले संचालनमा रहेका २७ वटै वाणिज्य बैंकमा कार्यरत कर्मचारीको लागि बैंकहरुले गरेको...
२०७८ भदौ ३१ गते १२:१५ मञ्जरी पौडेल
काठमाडौं । कृषि बाली तथा पशु बीमामा सरकारले दिने प्रिमियम अनुदान बढेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट मार्फत उक्त बीमाको प्रिमियम अनुदान अघिल्लो बजेटको तुलनामा ६० प्रतिशतले बढाएको हो । अर्थमन्त्री...
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि वित्तीय क्षेत्र तरंगित छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकापसमा मर्जर तथा एक्वीजिसनमा जाँदा प्राप्त भएको विजनेस कम्बिनेसनको सौदाबाजी लाभमा कानुन अनुसार नपाइने कर...
काठमाडौं । भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाका रामसुन्दर बके पेशाले घरजग्गा कारोबारी हुन् । उनी अहिले पनि घरजग्गा कारोबार नै गरिरहरेका छन् । तर, अहिले बाकेको अर्को पेशा थपिएको छ । उनी अहिले होटल/रिसोर्ट व्यवसायी भनेर...
२०७८ भदौ ७ गते १३:१४ सन्ताेष राेकाया
काठमाडौं । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी २०५० सालमा नेपाली बीमा क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा देशको पाँचौं निर्जीवन बीमा कम्पनी थियो । विभिन्न कालखण्डमा अनेकन आरोह अवरोहहरु सामना गरेको युनाइटेडले २८ वर्ष पार गरिसकेको छ । ‘रजत...
२०७८ साउन ३२ गते १३:२८ समुन्द्र घिमिरे
काठमाडौं । प्रत्येक वर्षको बजेट बनाउने बेलामा अर्थमन्त्रालयको टीमको दिमागमा आउने एउटै कुरा हो– कृषि प्रधान देश, कृषिले धानेको अर्थतन्त्र । देशको योजना तर्जुमा गर्ने राष्ट्रिय योजना आयोग पनि भनिरहेको हुन्छ– नेपालको दुईतिहाई जनसंख्या...
मेरो पुर्खा नै सुन व्यवसायमा छ । चार पाँच पुस्तादेखि यही व्यवसाय गर्दै आएका छौं । मैले थाहा पाएदेखि नै हाम्रो परिवारको व्यवसाय सुन व्यवसाय नै थियो । म आफै भने २०२२ सालदेखि सुन व्यवसायमा...
काठमाडाैं । बिहीबार हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच मर्जरका लागि सम्झौता भयो । दुई बैंकको लामो प्रयासपछि नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा बिग मर्जरको दाेस्राे प्रयासले अाैपचारिक बाटाे तय गरेकाे छ । इन्भेष्टमेण्ट बैंकको तर्फबाट...
२०७७ चैत ३१ गते १३:५८ सन्ताेष राेकाया
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल पक्कापक्की भइसकेका थिए । उनीसहित चेम्बरको नयाँ कार्यसमितिको नाम सार्वजनिक गर्न मात्रै बाँकी थियो । चेम्बर नयाँ कार्यसमितिको नाम सार्वजनिक गर्न ७० औं...
गाँजाको अर्थतन्त्रः विश्वभर ३ खर्ब ४० अर्ब डलरको बजार
२०७७ फागुन २७ गते १५:५५ विकासन्युज
काठमाडौं । आज महाशिवरात्री । शैव र हिन्दुहरुले महाशिवरात्री पर्व विशेष उल्लासका साथ मनाउने गर्छन् । नेपालमा शिवरात्रीमा ‘शिवबुटी’ भन्दै गाँजाको सेवन गर्ने प्रचलन छ । यद्यपि, नेपालको कानुनले गाँजाको प्रयोग, ओसार प्रसार र...
काठमाडौं । रियल सेक्टरका कम्पनीहरु पुँजी बजारमा आएनन् भनेर गुनासो भइरहेको समयमा सर्वाेत्तम सिमेन्ट पुँजी बजारमा आउने अन्तिम तयारीमा छ । तर, यो कम्पनीले नेपाली पुँजी बजारको इतिहासमै फरक तरिकाले आइपिओ जारी गर्न लागेको...
काठमाडौं । कोभिड १९ को महामारीले धेरै कुरा अस्तव्यस्त बनाइदियो । मानिसहरुको जनजीवनमा यसले ठूलै उथलपुथल ल्यायो । लकडाउनमा धमाधम पसल, रेस्टुराँहरु बन्द हुँदै गए । व्यवसाय ठप्प हुँदै गयो । राजधानीबाट मानिसहरु सुरक्षित...
काठमाडौं । नेपालमा उत्पादन भएको वस्तु विदेश निर्यात गर्नको लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र चाहिन्छ । यो प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई) ले पनि पाएको छ । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार सिएनआईले...
काठमाडौं । एउटा सानो खरको घर । घरमा मिठो मसिनो त परै जाओस् बिहान बेलुका छाक टार्नलाई पनि अन्न छैन । न आफ्नो जमिन छ नत अन्य कुनै सम्पत्ति नै । सानो खरको घर...
काठमाडौं । २०३८ सालतिर वीर अस्पताल पछाडिको महाबौद्ध क्षेत्र पुरै खेतबारी थियो । अहिलेको पुस्तालाई त पत्याउन मुस्किलै पर्ला । तर, महाबौद्धमै घर भएका डा. हेरम्ब बहादुर राजभण्डारीको आँखामा त्यसबेलाका दृश्यहरू झल्झली आईरहन्छन् ।...
झापा । नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड अर्थात एनएमसी कोपको इतिहासँग एउटा पृथक र दुःखद घटना जोडिएको छ । जतिखेर मानिसहरुमा नियमित बचतको बानी थिएन । मानिसमा त्यही बचतको बानी बसाल्न ठूलो भूमिका खेलेको...
काठमाडौं । सानो लगानीबाट सुरु गरिएको व्यवसायले कुनै बेला नसोचेको परिणाम दिदो रहेछ । यसमा निरन्तर मिहिनेत, लगाब र धैर्यताको भने खाँचो हुन्छ । ललितपुरको हरिसिद्धिका प्रेम कुमार महर्जनकै उदाहरण लिउँ । उनले २२...
चाख्ने हो त बाँसको ढुंग्रोमा पकाएको चिया र ब्याम्बो बिर्‍यानी ?
२०७७ माघ १४ गते १७:१८ नरेन्द्र रौले
काठमाडौं । हरियो बाँसको ढुंग्रोमा पकाएको चिया र बिर्‍यानी चाख्नु भएको छ ? रातोपुलमा खुलेको ‘ब्याम्बो बिर्यानी’ले यस्तै नौलो प्रयोग गरेको छ । बाँसकै संरचनामा निर्माण भएको यस कटेजमा बासकै कुर्सी, बाँसकै टेबलहरु छन्...
« अघिल्ला 1234…9पछिल्ला »